२०4848 खेल खेल्नुहोस् - 2048 Game
२०4848 खेल खेल्नुहोस्
जो थाह थियो भनी भन्दा हसाउने “Angry Birds” पछि, लत “Threes”, र एक हास्यकार “Flappy बर्ड”, त्यहाँ अर्को सबैभन्दा रोचक गर्नेछौं 2048 खेल अनलाइन आँधी गरेर इन्टरनेट लिन्छ कि?
हो, 2048 , एक नयाँ पहेली खेल लत खेल मा नवीनतम अनुभूति छ।
2048 नयाँ लोकप्रिय एकल-खेलाडी पहेली मोबाइल र वेब लागि खेल हो। यो भन्दा Threes गर्न जस्तै, एक प्रकार स्लाइड ब्लक पहेली छ, तर यसको सट्टा threes मिल्ने को, यहाँ तपाईं नै संख्या भइरहेको दुई टाइल्स को कुनै पनि मेल खाँदैन।
खेल विषय एक Sudoku-जस्तो ग्रिड समान थियो जो पुरानो timey पहेली खेल, Klotsk, आधारित? 2048 पनि एक Sudoku जस्तै गणित समावेश छ। यो 2048 खेल सुन्दर गणित आकर्षक छ, म बेइमान निश्चित, तपाईं यसलाई प्रेम छौँ छु।
को मुख्य लक्ष्य 2048 टाइल मा प्रदर्शन सम्म यो पुग्यो छन् सबै संख्या संयोजन छ 2048 तपाईं कोठा बाहिर चलान अघि।
एक 19 वर्षीया इटालियन किशोरी र प्रोग्रामर, गब्रिएललाई Cirulli, यो रोमाञ्चक निर्माण 2048 खेल । खेल वेब-आधारित छ, र तपाईं मोबाइल र वेब दुवै मार्फत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई विश्वास तपाईं मुग्ध हुनेछु तपाईं 2048 खेल खेल्न सुरु क्षण, यो धेरै, धेरै लत छ !!
2048 कामहरू कसरी?
यो कठिन छ 2048 प्ले र यसको अजीब गणित बुझ्न?
होइन, सबै, यो बीजगणित गणित बोरिंग छ, तपाईं मात्र केहि सेकेन्ड को अल्गोरिदम बुझ्न र gameplay को टास्नु प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ, एकपटक तपाईंले थाहा छ, यो गरेको उछाल !!
तपाईं एक च्याम्पियन हुनेछ !!
20484×4ग्रिड संग प्रदर्शन। त्यसैले जब तपाईं 2048 सुरु, तपाईं दुई टाइलहरू ग्रिड मा, प्रत्येक टाइल शो संख्या देख्नुहुनेछ कि त2वा 4
यी टायलसार्नुहोस् आफ्नो किबोर्ड को तीर कुञ्जीहरू वरिपरि साथै पनि2हो कि नयाँ टाइल्स उत्पन्न थिच्न सक्नुहुन्छ वा 4
दुई एउटै मूल्य टाइल्स प्रत्येक अन्य ठोक्किनु, तिनीहरू एक उच्च टाइल, दुवै टाइल्स को जो प्रदर्शित योगफल उत्पादन जडान गर्नुहोस्।
अधिक तपाईं वरिपरि प्ले, टाइलहरू उच्च प्राप्त हुनेछ, र बोर्ड थप भीड हुनेछ। तपाईंको परम लक्ष्य हासिल गर्न छ 2048 बोर्ड मा आफ्नो कोठा बाहिर चलिरहेको अघि।
कसरी 2048 मा जीत – सुझाव र चाल 2020
यो हसाउने खेल पछि गणित धेरै सजिलो छ तापनि, खेल 2048 नै राम्रो रणनीति र बिट चुनौतीपूर्ण आवश्यक छ।
म यसलाई धेरै समय गरेका; म यो खेल आशक्त छु; त्यो खेल्छ र पुग्न गर्दैन जब मेरो प्रेमिका पागल सबै समय हुन्छ 2048 ।
तपाईं कसरी पुग्न सोच हुन सक्छ 2048 समय टाइलहरू हजारौं पल्टाउन चाहँदैनन् किनभने चाँडै सकेसम्म। का केही काम सुझाव र चाल मा एक हेरौं;
टाइलहरू चाल बुझ्न;
मा 2048 खेल तपाईं मात्र चार आन्दोलनहरु माथि-तल र बायाँ-दायाँ छ। तपाईं पल्टाउन हरेक समय, टाइलहरू यसको स्थिति सार्न। टाइलहरू मात्र2वा4नम्बर प्रदर्शन, र प्रत्येक अन्य संयोजन गर्दा संख्या उच्च हुन्छ, ती दुई टाइल्स योगफल बराबर।
यो टायलसार्नुहोस् बुझ्न पर्याप्त अभ्यास राम्रो छ त, तिमी चिन्ने 2048 अल्गोरिदम, अधिक तपाईं पुग्न संभावना 2048 चाँडै।
ठूलो टाइल पछि जाने छैन
यो प्रलोभनको प्रतिरोध गर्न गाह्रो हुन र पछि बोर्ड मा ठूलो टाइल तिनीहरूलाई संयोजन जान्छ सक्छ। यो अक्सर रणनीति संग सानो संख्याको टाइल र प्ले संग संयोजन गर्न त रुचि, धेरै कठिन अवस्थामा राख्छ।
कुना मा रहन प्रयास
यो कुनामा मा टायलसार्नुहोस् र नयाँ टाइल्स ल्याउन पर्याप्त बोर्ड छ भनेर सुनिश्चित गर्न राम्रो छ। मान्छे, पुग्न दाबी गर्ने समूह टाइलहरू कुना मा, 2048 चाँडै।
बीचमा नयाँ टाइल्स ल्याउन प्रयास र त्यसपछि अन्यसँग संयोजन गर्न कुना गर्न मा स्वाइप गर्नुहोस्।
एक कदम अघि सोच्नुहोस्
कहिलेकाहीं तपाईं दिन छैन अप तपाईं राम्रो कदम छैन भने, सबै भन्दा राम्रो कदम हुन सक्छ के अनुमान गर्न सक्दैन। 2048 प्रस्ताव तपाईं यति धेरै लामो तपाईं बोर्ड मा खाली कोठा छ, तपाईंको खराब कदम देखि क्षतिपूर्ति गर्न अवसर।
जहाँ खेल बोर्ड मा कार्डहरू छन् सबै भन्दा राम्रो कदम हो के तपाईं भ्रमित छ भने, फेरि लाग्छ, र यो नयाँ कार्डहरू बारेमा सोच अघि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ वा छैन।
टाइल पछि धेरै टाइल मर्ज जाने
तपाईं एक मौका धेरै टाइल्स संयोजन गर्न धेरै पटक हुनेछ, यी कदम खोक्रो बनाउन प्रयास गर्नुहोस्।
यसलाई यसरी लिन, अधिक तपाईं ठाउँ खाली बोर्ड मा राख्नुहोस्, राम्रो मौका तपाईंले नयाँ कार्ड ल्याउन।
एकल कदम संग, तपाईं मात्र तपाईं एउटा नयाँ स्ट्याक कार्ड प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। धेरै कार्ड गर्दा, तपाईं मात्र एक कार्ड ल्याउँछन् तर पनि बोर्ड मा थप कार्डहरू छुटकारा रही।